घर » ईमेल डाटाबेस ब्लगहरू » डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा » सामाजिक वाणिज्य: यो के हो र यसलाई सामाजिक नेटवर्कहरूमा कसरी लागू गर्ने
फेब्रुअरी 14, 2019 in डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा ट्याग सामाजिक वाणिज्य: यो के हो र यसलाई सामाजिक नेटवर्कहरूमा कसरी लागू गर्ने by जकारिया हुसेन
के तपाइँ तपाइँको भागको रूपमा सामाजिक नेटवर्कहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ अनलाइन मार्केटिंग रणनीति ? youtube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस् के तपाईंसँग इन्टरनेटमा तपाईंको उत्पादनहरू (वा सेवाहरू) बेच्न ecommerce छ? यदि दुबै प्रश्नहरूको उत्तर हो हो भने, तपाईं 2018 को महान डिजिटल प्रवृत्ति मध्ये एक छुटाउन सक्नुहुन्न। सामाजिक वाणिज्य।
सामाजिक सञ्जालहरू र अनलाइन बिक्री को लागी वर्षौं को लागी गरीएको छ र व्यापक रूप बाट स्वीकार्य छ, तर अझै धेरै ब्रांडहरु छैन कि दुबै उपकरणहरु लाई कुशलतापूर्वक मिलाउँछ। ती जोसँग धेरै प्राप्त गर्न छ, त्यसैले हामी हेरौं कि वास्तवमा सामाजिक वाणिज्य के हो, यसले तपाइँको ब्रान्डमा के योगदान पुर्‍याउन सक्छ र "शीर्ष" नेटवर्कहरू के हुन् यसलाई जानका लागि।
सामाजिक वाणिज्य के हो?
यो सामाजिक वाणिज्य सामाजिक सुविधाहरू जस्तै सामाजिक नेटवर्कि,, सामाजिक प्रुफ र प्रयोगकर्ताहरूको नयाँ बिक्री च्यानल खोल्न र अनलाइन ग्राहक अनुभव सुधार गर्न को लागी योगदान को उपयोग गर्न को लागी हो। पहिलो नजरमा, हामी यो सोच्न सक्छौं कि यो केवल "सामाजिक नेटवर्कमा बेच्ने" हो र, हामीसँग कारणको अभाव हुने थिएन, तर सत्य यो हो कि त्यहाँ अझ धेरै छ।
बजारका लागि सामाजिक वाणिज्य एक तरीका हो synergies उत्पन्न गर्न र यसको फलस्वरूप रणनीतिक अवधारणामा हामीले दुबै परिवर्तन गरेका छौं अनलाइन बिक्री रूपमा r सामाजिक एड्स .
अनलाइन बिक्रीको अनुहारमा, यो प्रवृत्तिले नयाँ च्यानलहरू खोल्ने र खरीद चक्रलाई अधिक लचिलो बनाउँदछ। "परम्परागत" ईकामर्स मा, प्रयोगकर्ता या त उत्पादन को एक सक्रिय खोज को माध्यम बाट वा डिजिटल विज्ञापन (सामाजिक विज्ञापन, खोज इञ्जिन विज्ञापन, प्रदर्शन ...) को माध्यम बाट आइपुग्यो। साटोमा, यहाँ जडान प्रयोगकर्ताहरू बीचको सामाजिक सम्बन्धको माध्यमबाट देखा पर्दछ।
सामाजिक सञ्जालको सम्बन्धमा, बजारहरूले हाम्रो सामग्रीहरू फैलाउन र ब्रान्ड दृश्यता र जागरूकता उत्पन्न गर्न एक च्यानलको रूपमा प्रयोग गरेर वर्षौं बर्ष खर्च गरे, तर यो चिप परिवर्तन गर्ने समय हो र हामीले त्यसलाई बेच्न पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। बदलेमा, यसले हामीलाई यो च्यानलको साथ हामीले प्राप्त गरिरहेका आरओआईलाई ठीकसँग जान्न मद्दत गर्दछ, किनकि हामीसँग सामाजिक नेटवर्कहरू र बिक्रीमा लगानीको बीचमा धेरै प्रत्यक्ष लिंक हुनेछ।
सामाजिक वाणिज्य रणनीतिहरूको उदाहरण
इलेक्ट्रोनिक वाणिज्यमा सामाजिक तत्वहरू समावेश गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, र यो अपेक्षाकृत भर्खरको प्रवृत्ति भएकोले हामी यस सम्बन्धमा थुप्रै नयाँ घटनाहरू देख्ने अपेक्षा राख्छौं। आजको दिनसम्म, यी केहि उदाहरणहरू छन् कि कसरी ब्रान्डले सामाजिक बिक्री प्रयोग गरी उनीहरूको बिक्री बढाउनको लागि प्रयोग गर्दैछ।
सामाजिक नेटवर्क को माध्यम बाट खरीदारी
यो रणनीति फाइदा लिन मा आधारित छ खरीद आवेगहरूको प्रयोगकर्ताहरूले महसुस गर्न सक्छन् जब उनीहरू एक सामाजिक नेटवर्क को उपयोग गरीरहेका छन्, एक अधिक प्रत्यक्ष खरीद प्रक्रिया बनाउने र यसैले निकासीको संख्या घटाउने।
हामी छौं हाम्रो सामाजिक नेटवर्कमा निर्भर गर्दै, हामी हाम्रो ecommerce मा लिंक गर्न विभिन्न स्रोतहरू छन्; यस लेखको अन्तिम खण्डमा हामी ती मध्ये केही विस्तृत रूपमा हेर्नेछौं। सामान्यतया, यो रणनीतिले काम गर्नका लागि, हामीले उत्पादनलाई सान्दर्भिक वातावरणमा प्रस्तुत गर्नै पर्छ जुन ब्रान्ड र प्रयोगकर्ताहरूको मानहरू प्रबल गर्दछ र खरीद प्रक्रिया सकेसम्म स्पष्ट र सरल बनाउँनुहोस्।
सामाजिक परीक्षण (प्रयोगकर्ता मूल्यांकन)
यस रणनीतिले मार्केटिंग मनोविज्ञानको सबैभन्दा चर्चित र सार्वभौमिक ट्रिकहरूको प्रयोग गर्दछ: सामाजिक प्रमाण, त्यो हो, अरू व्यक्तिको धारणाले हामीमा पार्ने प्रभाव।
एक उत्पाद वा सेवा को बारे मा अन्य प्रयोगकर्ताहरु को टिप्पणीहरु हेरेर हामीलाई उनीहरु संग पहिचान गर्दछ र अधिक विश्वास पैदा गर्छौं यदि हामी केवल ब्रान्ड सन्देश पढ्छौं भने भन्दा।
हाम्रो सामाजिक वाणिज्य रणनीतिहरूमा सामाजिक प्रमाण समावेश गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, तर म यो कारकलाई दिमागमा राख्नुको महत्त्व हाइलाइट गर्न चाहन्छु। हाम्रो अनलाइन स्टोर डिजाईन गर्दै । उदाहरणका लागि:
प्रत्येक उत्पादनको ट्याबहरूमा खुला टिप्पणीहरू छोड्नुहोस्, प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको प्रभाव साझा गर्न प्रोत्साहित गर्ने सन्देशको साथ।
प्रत्येक उत्पादनको आकलन गर्न प्रणाली समावेश गर्दछ, उदाहरणका लागि, ठेठ "पाँच तारे", र यसलाई राम्रोसँग देखिने बनाउँदछ।
यसले प्रत्येक उत्पादनलाई बिभिन्न सामाजिक नेटवर्कमा स्वतन्त्र रूपमा साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई साझेदारी बटनहरू राखेर त्यसो गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
गुगल वा अन्य वेबसाइटहरूमा तपाईंको आफ्नै पृष्ठबाट लिंक सहितको समीक्षा प्रमोट गर्नुहोस्।
प्रभावकारी र माइक्रोइन्फ्लुएन्सरहरू
वर्षौं देखि, ब्रान्डले सामाजिक नेटवर्कहरू वा "प्रभावकारहरू" मा उनीहरूको उत्पादनहरू प्रमोट गर्न प्रख्यात प्रयोगकर्ताहरू प्रयोग गरिरहेको छ। यो रणनीतिले दुबै सामाजिक नेटवर्कहरू र सामाजिक प्रमाण दुवैको फाइदा लिन्छ (यस मामलामा सेलिब्रेटीहरू वा दिइएको विषयका विज्ञहरूको राय मार्फत) यसले सामाजिक वाणिज्यमा कसरी फिट हुन सक्छ भनेर सजीलो छ।
जहाँसम्म, हालसालै घटना "प्रभावकार" यसको पहिरिएको मूल्य र यसको विश्वसनीयता को संकटको कारण केही पोशाक र आँसुले ग्रस्त छ। नेटवर्कमा केही सेलिब्रेटीहरूले प्रायोजित सामग्रीको दुरुपयोग गरेका छन् र यसको मतलब यो हो कि तिनीहरू अब वास्तविक तरीकामा बुझेका छैनन्।
प्रतिक्रियामा, विज्ञापन माइक्रोइन्फ्लुएन्सरहरू देखा पर्दछ कि, प्रयोगकर्ताहरूसँग ज्यादै थोरै अनुयायीहरू छन् तर तिनीहरूसँग धेरै नजिकको सम्बन्ध छ। प्राय: तिनीहरू विज्ञहरू वा विशेष विषयको फ्यान हुन्। किनकि उनीहरू प्रभावकारीको रूपमा उस्तै तरीकाले पेशेवर भएका छैनन्, उनीहरूले अधिक विश्वसनीयता र ब्रान्डको लागि अधिक उचित मूल्यहरूको मजा लिन्छन्। पक्कै पनि यसको बदलामा हामीले उनीहरूको विश्वास कमाउनुपर्नेछ।
7 ब्रान्डको लागि सामाजिक वाणिज्यको फाइदाहरु
आईएबी स्पेनको भर्खरको अध्ययन अनुसार, एक्सएनयूएमएक्स% भन्दा कम इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन शपर्सहरू हुन् र एक्सएनयूएमएक्स% सामाजिक नेटवर्क प्रयोग गर्दछन्, त्यसैले यो निश्चित छ कि तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई यसको प्रभाव पार्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक वाणिज्यरणनीतिहरु।
ब्रान्डहरूको लागि, हाम्रो खरीद सूचीमा सामाजिक खरीद रणनीतिहरू समावेश गर्दै धेरै फाइदाहरू प्रस्तुत गर्दछ:
यो अनलाइन स्टोर मा यातायात, रूपान्तरण को प्रतिशत र मूल्य वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ आदेश को । समय जुनमा हामीले सोचे कि सामाजिक सञ्जालले मात्र कुराकानीमा सेवा गर्दछ धेरै टाढा गए। तथ्या .्कले देखाउँदछ कि प्रयोगकर्ताहरू यस च्यानललाई खरीद गर्न प्रयोग गर्न इच्छुक छन्, त्यसैले यसको फाइदा लिनु हुँदैन भनेर गल्ती हुनेछ।
यसले विविधता प्रदान गर्दछ रणनीतिहरु । के तपाईंलाई लोकप्रिय भनाइ "तपाइँको सबै अण्डा उही टोकरीमा हाल्नुहुन्न" थाहा छ? ठिकै छ, अनलाइन बिक्रीसँग उस्तै चीजहरू हुन्छन्: एकल च्यानलमा सबै चीज बेट्टि। गर्नु धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ र हामीलाई बम्प दिनको लागि हामीलाई डो .्याउन सक्छ। सामाजिक वाणिज्यको माध्यमबाट, हामी ट्राफिक र हाम्रो अनलाइन स्टोरमा रूपान्तरणको अर्को तरीका उत्पन्न गर्न सक्दछौं।
एकीकृत गर्नुहोस् ग्राहक सेवा । केहि समयको लागि, प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सेवाहरू ग्राहक सेवाको च्यानलको रूपमा प्रयोग गरेका छन्, उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ब्रान्डहरूको माग छ। र यदि हामी यसलाई अन्य विधिहरू जस्तै कल सेन्टरहरूसँग तुलना गर्छौं, सत्य यो हो कि यसले धेरै अर्थ राख्छ। ठीक छ, सामाजिक वाणिज्यको साथ हामी ग्राहक सेवा र बिक्री एकीकृत गर्न एक कदम चाल्न सक्छौं।
यसले आत्मविश्वास बढाउँदछ । यद्यपि टिप्पणीहरूको लागि धेरै ढोका खुला राख्नु जोखिमपूर्ण लाग्न सक्छ, सत्य यो हो कि यसले पारदर्शिताको धेरै अनुकूल प्रभाव दिन्छ। स्वाभाविक रूपमा, उपभोक्ताहरूले ब्रान्डहरूमा भरोसा राख्छन् जसले आफूलाई प्रयोगकर्ताहरूको रायमा समाहित गर्ने हिम्मत गर्छन्। र यसको फलस्वरूप तिनीहरूसँग उनीहरूले ग्यारेन्टी दिन्छ कि उनीहरू ब्राण्डमा भरोसा गर्न सक्छन्।
संलग्नता उत्पन्न गर्दछ लामो अवधि । सामाजिक वाणिज्य केवल बिक्री तुरून्त मात्र एक तरीका होइन, तर दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो। अन्तमा, हामी हाम्रो ब्रान्डको बारेमा राय र टिप्पणीहरूको सेट उत्पन्न गर्दैछौं जुन भविष्यका प्रयोगकर्ताहरूको लागि पहुँच योग्य हुनेछ र यसले हाम्रो दृश्यता बिस्तार बढाउँदछ।
यसले हामीलाई आफूहरू अलग गर्न अनुमति दिन्छ प्रतिस्पर्धा बाट । जे होस् अज्ञान वा नकारात्मक विचारको डरको कारणले, सत्य यो हो कि अझै पनि केही ब्रान्डहरू छन् जुन सामाजिक वाणिज्यको साथ हिम्मत गर्दछ, तर यो साना र मध्यम उद्यमहरूको लागि पनि एक पहुँच रणनीति हो। यसमा शर्त लगाउँदा हामीलाई स्पष्ट भिन्नता बनाउन र हाम्रो आदर्श ग्राहकहरूसँग बढी सजिलैसँग जडान गर्न मद्दत गर्दछ।
यो सेतो हो कि यसको पुच्छर काट्छ । अधिक सामाजिक कम्पनीहरूले उनीहरूको वरिपरि अधिक टिप्पणी र अन्तर्क्रिया उत्पन्न गर्दछन्, जसले परिणाम स्वरूप उनीहरूको सामाजिक छविलाई सुदृढ पार्दछ। संक्षेप मा, यो एक चक्र हो जुन जारी छ दृश्यता र परिणामहरू सुधार गर्नुहोस् छोटो, मध्यम र लामो अवधिमा।
सबै भन्दा लोकप्रिय सामाजिक वाणिज्य नेटवर्क
यस विन्दुमा, तपाईं सोचिरहनु हुन सक्छ कि किन नेटवर्कले तपाईंको आफ्नै सामाजिक वाणिज्य रणनीति कार्यान्वयन गर्न सुरू गर्दछ। सत्य यो हो कि त्यहाँ कुनै विश्वव्यापी जवाफ छैन, किनकि अन्तमा सबै भन्दा राम्रो नेटवर्क त्यो हो जहाँ तपाइँको लक्ष्य छ। तर तपाईंलाई अभिविन्यास गर्न हामी हामी मुख्य बिक्री स्रोतहरूको समीक्षा दिन जाँदैछौं जुन आजका ठूला सामाजिक नेटवर्कहरूले गणना गर्दछन।
फेसबुक सामाजिक वाणिज्य रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भवत सबैभन्दा तयार नेटवर्क हो किनभने यसमा तपाईंको फ्यान पृष्ठमा इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य एकीकृत गर्न धेरै विकल्पहरू छन्:
शोकेस (स्टोरफ्रन्ट): यो विकल्पले तपाईंको उत्पादनको स्थैतिक संस्करण प्रदर्शित गर्दछ, कि यो प्रभावी ढ a्गले क्याटलग वा स्टोरफ्रन्टको रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्दछ। त्यहाँबाट हामी खरीद प्रक्रियाको साथ सामान्य जारी राख्न हाम्रो वेबसाइटमा ट्राफिक निर्देशित गर्न सक्छौं।
स्टोर : यसको नामले सुझाव दिए जस्तै यो कार्यक्षमता एक अनलाइन स्टोर हो जुन हाम्रो फ्यान पृष्ठमा विशेष ट्याब मार्फत एकीकृत हुन्छ। यहाँ हामी उत्पादनहरू र सम्बन्धित जानकारी थप्न सक्दछौं, सूची चयन गर्नुहोस्, ग्राहकहरूसँग कुराकानी गर्न, सिफारिसहरू लिन र तथ्या consult्कहरू परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। अमेरिकामा आधारित ब्रान्ड्सले पृष्ठबाट सिधै अर्डरहरू बिक्री र प्रबन्धन गर्न सक्दछ, रद्द र फिर्ती सहित।
स्मार्ट स्टोर (स्मार्ट फेसबुक स्टोर): स्मार्ट स्टोर अनुप्रयोगहरू एक कदम अगाडि छन्, किनकि उनीहरूले प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्दछ। स्टोरमा उत्पादनहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई देखाइन्छ जुनसँग यो पहिले नै अन्तर्क्रिया गरेको छ।
यी विकल्पहरूको साथसाथै हामी फेसबुक विज्ञापन लक्ष्यीकरण क्षमताको पनि फाइदा लिन सक्छौं। यी विज्ञापनहरूमा बिभिन्न स्वरूपहरू र लक्ष्यहरू समावेश छन् जुन विशेष रूपमा प्रयोगकर्ताहरूलाई खरीद गर्न प्रोत्साहित गरिएको थियो।
सामाजिक वाणिज्यको लागि अर्को धेरै शक्तिशाली नेटवर्क, यसको दृश्य प्रकृतिले प्रस very्गमा उत्पादनहरू देखाउन यो धेरै उपयुक्त बनाउँदछ। साथै, इन्स्टाग्राम शपिंग को लागी धन्यवाद, यो धेरै सजिलो छ तपाइँको प्रकाशनहरू सिधै बिक्रीमा लि link्क गर्न .
कसरी? धेरै सरल: तपाइँको अनलाइन स्टोरमा बिक्री पूरा गर्न तपाईले प्रकाशित गर्नुभएका छविहरूमा उत्पादनहरू ट्याग गर्दै। "म यो चाहान्छु!" जस्तो आवेगबाट फाइदा लिनको लागि एक धेरै नै प्रभावकारी तरीका।
इन्स्टाग्राम शपिंग सुरूवात गर्नका लागि तपाईसँग फ्यान पृष्ठ र इकमर्स हुनुपर्छ र इन्स्टाग्राममा कम्पनी प्रोफाइल हुनुपर्दछ।
यसको स्थापनादेखि नै, Pinterest शपिंगसँग नजिकबाट सम्बन्धित नेटवर्क भएको छ किनकि यसको मुख्य विषयवस्तु (फेसन, सौन्दर्य, सजावट) ले यसलाई धेरै उधारो दिन्छ।
यस नेटवर्कमा मुख्यतया महिला दर्शकहरू र एक राम्रो खरीद शक्ति छ, जसले यसलाई अझ रमाईलो बनाउँदछ।
पिनटेरेस्टलाई तपाइँको इकमर्समा लिंक गर्न सबैभन्दा साधारण रणनीति भनेको तपाइँको बिभिन्न उत्पादनहरूका लागि "पिन" सिर्जना गर्नु हो र तिनीहरूलाई सम्बन्धित लिंकसँग सम्बद्ध गर्दछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि Pinterest भित्र स्थिति जैविक हो, त्यसैले यो राम्रोसँग काममा लगानी गर्न लायक छ।
ट्विटर आफैंमा विशिष्ट सामाजिक वाणिज्य प्रकार्यहरू छैनन्, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले यसलाई आफ्नो रणनीतिहरूमा खारेज गर्नु पर्छ। तपाईको ट्वीट्सलाई तपाईको इकमर्समा लिंक गर्न, तपाईले चर्पीफाई जस्ता अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईलाई "खरीद" बटन समावेश गर्न अनुमति दिन्छ र यस नेटवर्कबाट तपाईको अनलाईन स्टोरमा लिंक प्रदान गर्दछ।
ट्विटरको साथ जस्तै, YouTube अनलाइन खरीदहरूलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष सुविधाहरू छैन। तर थोरै सिर्जनशीलताका साथ, तपाईं यसलाई उत्पादन र सेवाहरू सन्दर्भमा देखाउनका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको इ-कॉमर्समा तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूलाई निर्देशित गर्न तरिकाहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
← गिफी कसरी प्रयोग गरिन्छ? सेवा समाचारहरूको बारेमा
डिजिटल मार्केटिंग: तपाईंको ब्रान्डको लागि समावेशी भाषा →